Wasiirka cusub ee Caafimaadka Puntland oo la dhaariyay. – SBC
Wasiirka cusub ee Caafimaadka Puntland oo la dhaariyay.
Posted by Webmaster on July 6, 2015 Comments
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Caafimaadka Dawladda Puntland Dr.Cabdinaasir Cismaan Ciise ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 6-7-2015 lagu dhaariyey xafiiska Madaxtooyada Dawladda Puntland ee magaalada Garoowe.
Garsoore Aadan Cumar Maxamed oo katirsan Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta wasiirka cusub u dhaariyey xilka loo dhiibay, kadib markii uu Madaxweynaha hortiisa ku dhaariyey si uu uguto waajibaadka horyaala.
Dhaarta kadib ayaa madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa uu Alle uga baryey wasiirka cusub in xilka uu u dhaartay uu u fududeeyo, welibana kula dardaarmay in uu si hufan oo daacadnimo ku dheehantahay u guto waajibaadka shaqo ee horyaala.
‘’ Wasaaradda caafimaadku waa halbolihii dalka, waana wasaarad shaqeysa runtiina shaqo fiican laga qabtay , waxaa lagaa rabaa inaad halkaa ka sii wado shaqadeeda kana sii siyaadiso, qof walbana meel buu keenay adna waxaa lagaa rabaa inaad wax ku darto ‘’ Ayuu yiri Madaxweynuhu.
‘’ Wasiiiradii kaa horeeyey aad bay iyana umahadsan yihiin shaqo fiican ayey soo qabteen , adigana waxaan kuu rajeyn inaaad meesha ka sii wado , dabcan dhakhtar baad tahay takhasuskaagii weeye , guul iyo kheyr baana kuu rajeyn ‘’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Gaas.
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Caafimaadka Dawladda Puntland Dr.Cabdinaasir Cismaan Ciise ayaa isna dhankiisa madaxweynaha uga mahadceliyey xilka uu u igamaday , waxaana uu balan qaaday inuu sii wadayo howlaha shaqo ee ay shacabka reer Puntland uhayso wasaaraddda Caafimaadka.